ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကောလဟာလတွေကို အက်စတာ ဒဲ့ရှင်းပြီ
လတ်တလော အက်စတာတစ်ယောက် မြန်မာအိုင်ဒေါလ်မှာ Winner ရခဲ့တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေဆီက ကောလဟာလတွေနဲ့ဝေဖန်မှုတွေအပြင်းအထန်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အက်စတာက ” အော် သမီးက 2017 မှာChin Idol မှာ winner ဆုရခဲ့တယ် အဲကနေတစ်ဆင့် winner ရတဲ့သူကို နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ချင်းအဖွဲ့အစည်းကနေပီးတော့တစ်ဆင့်Gospel concert လုပ်ဖို့ခေါ်တယ်( သမီးတို့ချင်းလူမျိုးကဆင်းရဲတယ် ရှင့် သီချင်းဆိုပီးတော့ပိုက်ဆံအများကြီးရဖို့အရမ်းခက်ခဲတယ် ဒါမယ့်ပြည်ပမှာနေတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကချင်းလူမျိုးတွေကနေတစ်ဆင့် သမီးတို့ ချင်းလူမျိုးထဲက Gospel singer ပဲဖြစ်ဖြစ် love song singer ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ပံ့ပိုးမှုကနေတစ်ဆင့် အဆိုတော်တွေအရမ်းတော်လွန်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာထက် ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းသမီးတို့ရဲ့ ကြိုးစားမှုကိုအသိမှတ်ပြုပေးတဲ့အနေနဲ့မြှင့်တင်ပီးတော့ရိုင်းပင်းကူညီပေးခဲ့ကြတယ် အဲလိုမြှင့်တင်ခံရတဲ့ထဲမှာ သမီးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်) ဒီလိုနိုင်ငံခြားသွားတာ သမီးပိုက်ဆံတစ်ပြားတောင်မကုန်ခဲ့ပါဘူး ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ဆိုရင်လည်းမသွားနိုင်ပါဘူးအဲလောက်မချမ်းသာဘူးရှင့် ပီးတော့ အနုပညာကြေးက မြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာကြေးရသလိုမျိုးမရဘူးရှင့် …
ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ Sulli နဲ့ Goo Hara တို့ကို Yoo Jaesuk ချီးကျူးဂုဏ်ပြု
Yoo Jaesuk ကတော့ ဒီဇင်ဘာ (၂၈)ရက်နေ့က 2019 SBS Entertainment Awards ပွဲမှာ Grand Prize ဆု ရခဲ့ပါတယ်။ ဆုလက်ခံရယူရင်း ကျေးဇူးတင်စကား ပြောချိန်မှာတော့ Sulli နဲ့ Goo Hara အ ကြောင်းကိုပါ ထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဆု လက်ခံ မိန့် ခွန်းမှာတော့ ..” ကျတော် ဘာ ပြောရမှန်းတောင် မသိအောင်ပါပဲ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ လာမယ့်နှစ်မှာ Running Man (၁၀)နှစ်ပြည့် တော့မယ့် အချိန်မှာ အခုလို ဆု ချီးမြှင့် ခံခဲ့ ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေပဲ ဒီဆုကို …
ပရိသတ်တွေကို အမှတ်တရအနေနဲ့ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်မဲဖောက်ပေးမယ့် မြတ်သူသူ
မြတ်သူသူကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အပြည့်အဝရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသလို မြတ်သူသူကိုယ်တိုင်ကလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းကို အလေးထားကာ ပရိသတ်တွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ ပြန်လည်ဆက်ဆံပြီး ဟန်ဆောင်မာန်မာနမရှိ ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ မြတ်သူသူဟာ သူ့ကို အားပေးပြီးချစ်ခင်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းမယ့် အခုလို ဒီဇင်ဘာလ အချိန်အခါသမယလေးမှာ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်လေးတွေ ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးပေးမယ့် အကြောင်းကိုတော့ “နှစ်ကူးလက်ဆောင် အနေနဲ့ T-Shirt လေး (10)ထည် အမှတ်တရ မဲဖောက်ပေးချင်ပါတယ်နော်။ စောင့်နေပေးနော်။”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဖော်ပြထားပါတယ်။ မြတ်သူသူက သူ့ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကို နှစ်သစ်မှာ အမှတ်တရလေးဖြစ်နေစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခုလို နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်လေးကို ပေးဖို့စီစဉ်ထားတာလည်း …
ကြည့်ရှုနှုန်း စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ “Crash Landing on You”
“Crash Landing on You” ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲ ကတော့ အခုဆိုရင် ကိုရီးယားမှာ တင်မကပဲ အာရှတစ်လွှားမှာ ပါ အရမ်းကို နာမည်ကြီး နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြားမှာလည်း မြောက်ကိုရီးယားက ဗိုလ်ကြီးက အရမ်းကို ရေပန်းစားနေပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာဆိုရင် ကြည့်ရှုနှုန်း စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အထိ လူ ကြည့်များခဲ့ပါတယ်။ အပိုင်း (၅) နဲ့ (၆) ကိုတော့ ဒီဇင်ဘာ (၂၈) နဲ့ (၂၉)တို့မှာ ထုတ်လွှင့်ပြခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံး ထုတ်လွှင့်ပြခဲ့တဲ့ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကတော့ ကြည့်ရှုနှုန်း တစ်ဟုန်ထိုး မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ AGB Nielsen ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အပိုင်း (၅) က …
ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အတူသီဆိုထားတဲ့ အမှားသီချင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကျေနပ်နေတဲ့ ရွှေထူး
ရွှေထူးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်းရိုက်ကူးလာတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေထူးကတော့ မင်းသမီးချေောလေး ရွှေမှုံရတီနဲ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ချစ်ခင်ရတဲ့အနုပညာရှင်စုံတွဲလေးပါ။ လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း နှစ်ယောက်အတူသီချင်းလေးတွေဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးထွက်ရှိတာကတော့ အမှားသီချင်းဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။အမှားသီချင်းမှာတော့ အဆိုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရွှေမှုံရတီရဲ့အနုပညာအရည်အချင်းကို ပရိသတ်တွေကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ(၈)ရက်(၂၀၁၈)မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီသီချင်းဟာ လူကြိုက်များခဲ့သလို အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ဆိုရမှာပါ။ အခုဆိုရင် Legacy Music YouTube မှာ၂၀၁၉ တစ်နှစ်တာအတွင်း ပရိတ်သတ်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအများဆုံးစားရင်းဝင် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ရွှေထူး နှင့် ရွှေမှုန်ရတီ ရဲ့ အမှား သီချင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းရွှေထူးက သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်မှာပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက် ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်းပါ…. Source : ShweHtoo ,Legacy Music,CRD-Cele Gabar UNICODE ခဈြဇနီးလေးနဲ့အတူသီဆိုထားတဲ့ အမှားသီခငျြးရဲ့အောငျမွငျမှုအတှကျကနြေပျနတေဲ့ ရှထေူး ရှထေူးကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့နာမညျကွီးအဆိုတျောတှထေဲကတဈယောကျဖွဈပါတယျ။အခုအခြိနျမှာ ရုပျရှငျဇာတျကားတှလေညျးရိုကျကူးလာတာဖွဈပွီး ပရိသတျတှကေသရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့အသိအမှတျပွုလာခဲ့ပွီလညျးဖွဈပါတယျ။ရှထေူးကတော့ မငျးသမီးခြေောလေး ရှမှေုံရတီနဲ့လကျထပျထားတာဖွဈပွီး ပရိသတျခဈြခငျရတဲ့အနုပညာရှငျစုံတှဲလေးပါ။ လကျထပျပွီးနောကျပိုငျးမှာလညျး …
ဒိုင်တွေပေးတဲ့အမှတ်အများဆုံးရခဲ့ပေမယ့် Voting ကြောင့် ပြိုင်ပွဲက ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ တေဇာကျော်
ပရိသတ်ကြီးရေ ခုတလောရေပန်းစားနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေထဲကမှ အခုဆို ပရိသတ်တွေတဖြည်းဖြည်း စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ Dancing with the Star ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်လေးကတော့ အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ Dancer သမားတွေအတွက် ပန်းတိုင်တစ်ခုစိူက်ထူးနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်တဲ့အပြင် ပရိသတ်အချစ်တော် ဆယ်လီတွေ များစွာပါဝင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲကြီးဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။ လက်ရှိမှာတော့ ယှဉ်ပြိုင်လာကြတာ Week – (10) ထိရောက်ရှိလာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကကျရောက်ခဲ့တဲ့ Week – (10) ပြိုင်ပွဲမှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ တေဇာကျော် တို့ အတွဲကတော့ ပြိုင်ပွဲက ထွက်ခွာခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိုင်တွေပေးတဲ့ အမှတ်တေထဲမှာ အများဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင်အတွဲ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် Voting အနည်းဆုံးအဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် …
တကယ်လို့ …. ထီပေါက်ခဲ့ရင် ထီရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာ သွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေ ထည့်သွားရမလည်း ဆိုတော့….
တကယ်လို့ …. ထီပေါက်ခဲ့ရင် ထီရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာ သွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေ ထည့်သွားရမလည်း ဆိုတော့…. ထီပေါက်ရင် ထီ ရုံးချုပ် ၃၇လမ်းမှာ သွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေ ထည့်သွားရမလည်း ဆိုတော့ (1) အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ (2) မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ (3) ထီလက်မှတ် (4) ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ ၁ ပုံဆိုရပါတယ်) အပေါ်ကအချက်အလက်များကိုယူသွားရပါမယ် ရုံးချုပ်ရောက်ရင် အပေါက်ဝမှာ အဝင်အထွက်စစ်ဆေးတဲ့ အန်တီ(သို့)ဦးလေးကို ထီသွားထုတ်မလို့ပြောပြီး နာမည်ရယ် မှတ်ပုံတင်ရယ်ရေး လက်မှတ် ထိုးရပါမယ် …။ ပြီးရင် ၃လွှာကို ဓါတ်လှေကား (သို့) …
သင်ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သင့်ဘေးကထွက်ခွာမသွားမယ့်ချစ်သူမျိုးဆိုတာ ဒီလိုပါ
သင်ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး သင့်ဘေးကထွက်ခွာမသွားမယ့်ချစ်သူမျိုးဆိုတာ ဒီလိုပါ ချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေမရှားပေမယ့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တစ်ဘ၀လုံးစာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ထာဝရချစ်သွားမယ့် ယောက်ျားလေးမျိုးကတော့ရှိတော့ရှိတယ်၊ ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။အခု Auntymay ပရိသတ်ကြီးကို အဲ့ဒီလို ခပ်ရှားရှားယောက်ျားလေးတွေရဲ့အမူအကျင့်တွေနဲ့သူတို့မှာ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ဘယ်လိုအချက်လေးတွေရှိနေ တယ်ဆိုတာ ပျိုမေလေးတွေသိစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …. ။ (၁) ပြဿနာကို ခေါင်းမရှောင်တတ်ဘူး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတစ်ဘ၀လုံးစာရည်ရွယ်ထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံပါစေ ရှောင်ပြေးမသွားပါဘူး။ မထူးဇာတ်ခင်းပြီး အရက်နဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖြေသိမ့်နေမယ့် သူမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အတွက်တခါတလေ ငြီးငွေ့စရာကောင်းခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် ဂရုစိုက်မှု၊အလေးထားမှုတွေနဲ့ သူ့ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာပါ။ (၂) သင့်ဘက်ကိုအမြဲစဉ်းစားပေးတယ် ယောက်ျားတစ်ယောက်ဥာဏ်ပညာကြီးတာဟာ သူဘယ်လောက်ထိ စမတ်ကျတယ်၊ ထူးချွန်ထက်မြက်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာမမူတည်ဘဲ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခက်အခဲအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်တွေ ဘယ်လောက်ပေးနိုင်သလဲ၊ရှုထောင့်ပေါင်းစုံရဲ့အမြင်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။အဲဒီလိုချစ်သူမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေစရာတွေကြုံလာခဲ့ရင်တောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်း ရမလဲဆိုတာသိလို့ သင့်ကိုထားသွားဖို့မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ (၃) သင့်အမှားတွေကို …
နှစ်ဟောင်းမှ အညစ်အဆိုးတွေပါမလာဖို့ ပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်လျက် နှစ်သစ်ကူးနည်း
နှစ်ဟောင်းမှ အညစ်အဆိုးတွေပါမလာဖို့ ပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်လျက် နှစ်သစ်ကူးနည်း ပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်လျက် နှစ်သစ်ကူးခြင်း ၁။ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ည ၁၁ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင်စတင်၍ ဩကာသကန်တော့ချိုးဖြင့် ဘုရားရှိခိုးခြင်း၊ ငါးပါးသီလခံယူခြင်း၊ နတ်ပင့်ခြင်း၊ မေတ္တသုတ်ရွတ်ခြင်းတို့ကို ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်တွင်ပြီးဆုံးစေရပါသည်။ ၂။ ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်မှစ၍ ဟေတုပစ္စယော၊ အာရမဏ္ဏပစ္စယော အစချီ၍ ပဌာန်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသနှင့် ပစ္စယုဒ္ဒေသတို့ကို ဆက်လက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရပါမည် … ။ ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်ဟောင်းမှ နှစ်သစ်သို့ ပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်လျက် နှစ်သစ်ထဲသို့ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည် … ။ ထိုသို့ပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်လျက် နှစ်သစ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ထိုနှစ်တစ်နှစ်လုံးတွင် ကျရောက်နေဆဲ ဒုက္ခမှ …
(71)နှစ်အရွယ်ဇနီးကို သူများလုသွားမှာစိုးလို့ အိမ်တွင်းပုန်းခိုင်းတဲ့ (16)နှစ်အရွယ်ခင်ပွန်း
(71)နှစ်အရွယ်ဇနီးကို သူများလုသွားမှာစိုးလို့ အိမ်တွင်းပုန်းခိုင်းတဲ့ (16)နှစ်အရွယ်ခင်ပွန်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ တောင်ဆူမားတြားပြည်နယ်မှာ၊ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အသက် 16 နှစ်အရွယ် သတို့သားနဲ့ 71 နှစ်အရွယ် သတို့သမီးတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာ ပလူပျံခဲ့ပါတယ်။ အသက် 16 နှစ်အရွယ် Selamat Riayadi နဲ့ သူရဲ့ ဇနီး Rohaya တို့ဟာ အချင်းချင်း ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီးနောက် ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက သဘောမတူခဲ့ကြပါဘူး …။ အဓိကကတော့ Selamat နဲ့ Rohaya တို့ ရဲ့ အသက်ကွာခြားမှုကြောင့် ဆွေမျိုးတွေက သဘောမကျ ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် နှစ်ဦးစလုံးက သူတို့ချစ်ခြင်းကို အရှင်အတိုင်းတော့ ခွဲလို့မရဘူး။ အသေအတိုင်းသာ ခွဲလို့ရမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြလို့ …
This Month : 46531
This Year : 100614
Total Users : 395747
Total views : 1427015